Fall Guys nweworị nke Epic Games mgbe ịzụrụ ụlọ ọrụ ha | Gam akporosis
Egwuregwu Epic zụtara Mediatonic, ụlọ ọrụ na-emepụta Fall Guys
Egwuregwu Epic kwupụtara awa ole na ole gara aga ịzụta Tonic Games Group, ụlọ ọrụ nne na nna nke ụlọ ọrụ Mediatonic, onye okike nke Fall Guys; Egwuregwu ahụ dị n'ịntanetị nke were nwamba ahụ banye na mmiri n'oge okpomọkụ ikpeazụ nke ọtụtụ YouTubers nwere ntiwapụ.
Ka kwuru Tim Sweeny, onye isi oche nke Epic Games, ọ bụghị ihe nzuzo na ha na-ekepụta ọgwa Egwuregwu Tonic na-ekerịta otu ihe mgbaru ọsọ na ezigbo. Nnyocha nke gafere n'aka ndị nwe Fortnite na egwuregwu ndị ọzọ, na n'oge na-adịbeghị anya, ha na Apple na-ahụ ha.
Sweeny na-ekwu na n'ihi nke okike nke odi n'ihu a, ha choro ikike okike di elu n’ime ha ndi mara otu esi ewuru egwuregwu di egwu, ọdịnaya, na ihe omuma.
Nnukwu ozi ọma!@Mediatonic Obi dị m ụtọ ịkpọsa na anyị esonyela na ya @Igihe ezinụlọ!
Kedu ihe nke a pụtara? Obi dị m ụtọ na ị jụrụ!
- Fall Guys 4041? OZO (@Ogechi_onyi) March 2, 2021
Dave Bailey, CEO nke Tonic Games Group, na nkwupụta na-ekwusi ike na dịka ha na-ekwu, onye ọ bụla kwesiri ka egwuregwu yiri ka ọ bụ maka ha. Na Epic, site n'okwu Bailey, ọ dị ka ha nwere ụlọ e mere maka ha.
N'etiti ụfọdụ n'ime okwu ahụ were mkpa na okwu ndị sochiri nzụta nke Epic Games of Tonic Games Group, anyị na-ekpe na ọdịnihu nke Fall Guys agaghị egbochi ya site na ịzụta. Na na ọ ga-aga n'ihu na-egwu ma na PC na Playstation na mbụ na Nintendo Switch na Xbox.
N'eziokwu Mediatonic kwuru na blog na akụkọ ahụ n'onwe ya bụ nnukwu mmeri maka Fall Guys; ya mere maka akụkụ nke anyị ga - eme, ka anyị nwee olileanya na ha agaghị ewe oge na nsụgharị gam akporo. Ma ọ bụ na kemgbe oge okpomọkụ gara aga, ụlọ ọrụ ahụ toro site na ndị mmepe 35 ruo ihe karịrị 150. Ma n'agbanyeghị nke ahụ, a ka nwere ọtụtụ ihe ị ga-eme na Fall Guys; mgbe anyị ga-akpọ ụfọdụ ndị ọzọ yiri egwuregwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Egwuregwu Epic zụtara Mediatonic, ụlọ ọrụ na-emepụta Fall Guys
Queen: Rock Tour dị ugbu a dị ka egwuregwu egwu iji weghachite akụ egwu
Meizu 18 na Meizu 18 Pro bụ ndị ọrụ gọọmentị na Snapdragon 888 na gam akporo 11